Nisy zavatra nofafanao tsy nety ve? iPhone Data Recovery no vahaolana | Vaovao momba ny gadget
Avy amin'ny tanan'ny Tenorshare, orinasa iray manokana amin'ny rindrambaiko fanamboarana sy fanarenana ho an'ny fitaovana iOS sy Android, tonga eto aminay iPhone Data Recovery, fitaovana matanjaka izay hahafahantsika mamerina WhatsApp voafafa, naoty, fifandraisana ary koa sary hadisoan'ny iPhone. Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny iPhone rehetra manomboka amin'ny iPhone 4 ka hatramin'ny iPhone 7. Hiresaka kely momba ny iPhone Data Recovery izahay, ary ny karazana fiasa ananany mba hamonjeny ireo fampahalalana manan-danja. Na izany aza, tsy io ihany no mety ananan'ity fitaovana rindrambaiko tsy mampino ho an'ny mpihaino rehetra ity, milaza aminao bebe kokoa momba ny iPhone Data Recovery izahay.
1 Sakano sy sitrana amin'ny fisintomana ireo rakitra
2 Fahafahana tsy manam-petra
3 Mamerina vaovao avy amin'ny backup iTunes
4 Izy io dia afaka mamerina ny backup iCloud
5 Amboary ny iPhone raha mihidy amin'ny sary famantarana paoma
6 Ahoana no fomba ahazoana iPhone Data Recovery?
Sakano sy sitrana amin'ny fisintomana ireo rakitra
Ny mahatsara ny iPhone Data Recovery dia ny hamela antsika amin'ny tsindry vitsivitsy fotsiny sy amin'ny fomba mandeha ho azy avereno indray ireo fampahalalana rehetra efa nomenay ho very, ary tsy miresaka marina momba an'io fampahalalana tavela io isika noho ny hadisoan'ny rafitra (izay horesahintsika avy eo), fa momba ireo angon-drakitra izay nofafantsika tsy nahy. Noho izany dia tsy maintsy manomboka ny fitaovana fotsiny isika iPhone Data Recovery ary ampidiro ao amin'ny PC / Mac amin'ny alàlan'ny USB ny fitaovana, avy eo mifidiana ny maody mifanaraka amintsika indrindra sy ny karazan-drakitra tianay haverina, satria ny fahafaha-manao dia tsy misy farany.
Hanomboka amin'ny scanner amin'ny alàlan'ny tsipika fandrosoana ny programa. Ho fanampin'izay, ny configurement dia hahafahantsika misafidy fiteny telo, Japoney, anglisy ary frantsay, ankoatry ny espaniola tsotra. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manana kafe isika araka ny tondroin'ny programa, fa ny tena izy dia tsy haharitra mihoatra ny telo na dimy minitra ary efa ananantsika avokoa ny fampahalalana nofidintsika, ahafahana manatanteraka ny backup.
Raha vantany vao vita ny scan, dia hasehony antsika ny topy maso, fampiharana amin'ny alàlan'ny fampiharana, ny atiny izay hitany tao amin'ny fahatsiarovan-tsarimihetsika momba ny fitaovantsika, ary amin'izany no ahafahantsika manivana sy mamerina ny angona tsy mahaliana antsika fotsiny.
Amin'ny alàlan'ny iPhone Data Recovery dia afaka mamerina ny vaovao isan-karazany amin'ny endrika isan-karazany isika, ity ilay lisitra fototra atolotry ny fampiharana ary iharan'ny fanavaozana izany.
Messages (miaraka amina miraikitra)
Fanamarihana (miaraka amina kofehy)
WhatsApp (miaraka amina kambana)
Kalandrie sy fampahatsiahivana
Viber antso sy hafatra
Safari Bookmarks sy Favorites
Fanamarihana amin'ny feo
Tsy fohy amin'ny fampiasa rehetra io, fa ny tena izy dia iPhone 7 Data Recovery Afaka manao zavatra bebe kokoa izy io, ary izany no tianay haseho anao eto ambany. Ny fampiharana dia tsy hoferana amin'ny angona mety ho hitantsika ao amin'ilay fitaovana fotsiny fa ho any amin'ireo kopian'ny iTunes sy iCloud raha irintsika.
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny rindrambaiko dia tanteraka mifanaraka amin'ny iOS 10 sy iPhone 7.
Mamerina vaovao avy amin'ny backup iTunes
iPhone Data Recovery koa dia afaka mamakafaka ny nomaniny ho solon'izay iTunes. Raha teo aloha na tamin'ny fotoana sasany dia nanao backup, naka encrypt na tsia isika tao amin'ny PC / Mac, azontsika atao ny miditra amin'ny alàlan'ny iPhone Data Recovery, raha ny tena izy ilay fitaovana dia mahita azy io ary mampiseho antsika eo amin'ny efijery hahafahantsika safidio izay mifanentana indrindra aminay. Amin'izany fomba izany dia afaka mamerina tsy ny angon-drakitra very ao amin'ny iPhone ihany isika, fa ireo data koa ao anaty backup iTunes izay tadiavintsika noho ny antony sasany.
Izy io dia afaka mamerina ny backup iCloud
Raha toa ka tsy notsofina rano ampy anao ny fanarenana data mivantana avy amin'ny backup iTunes, iPhone Data Recovery koa dia afaka misintona sy mamakafaka ireo backups iCloud anay hahazoana ny fampahalalana tena ilaina rehetra, miaraka amin'ireo toetra mitovy amin'ny hoe nataontsika mivantana tamin'ny iPhone. Noho izany dia tsy maintsy mampiasa ny kaonty Apple ID na iCloud antsika isika, na izany aza, mampanantena antsika ny ekipa Tenorshare fa ny angon-drakitra dia voahidy ary hampiasaina fotsiny hifandraisana amin'ny mpizara Apple, ka tsy atahorana ny fiainantsika manokana.
Amboary ny iPhone raha mihidy amin'ny sary famantarana paoma
Ny sary famantarana paoma izay atahorantsika rehetra. Rehefa "bricked" ny fitaovana Apple (lesoka mahafaty ao amin'ny système d'exploitation) dia miseho tsy tapaka ny logo Apple ary tsy mahavita boot. iPhone Data Recovery manolotra antsika farany mety. Hasiana scan ny fitaovana iray manontolo hahitana ireo rakitra OS simika sy hanamboarana azy ireo, mba hahafahantsika mankafy ny iPhone indray nefa tsy very data iray akory. Ho an'ity dia hampiasainay ny fitaovana fanarenana ary hitifitra vitsivitsy monja izy io. Toy ny sisa amin'ny fitaovana, dia mora ampiasaina izy io.
Ahoana no fomba ahazoana iPhone Data Recovery?
Raha te hahazo dika mitovy amin'ny iPhone Data Recovery dia mila mankany amin'ny tranonkalany fotsiny isika. Raha vantany vao ao anaty isika dia mahita fitsapana maimaimpoana miaraka amin'ny fahaiza-manao voafetra sy maharitra, ary ny kinova feno amin'ilay programa, izay amin'izao fotoana izao Mihena izany hatramin'ny 83,99 € hatramin'ny 49,99 inona ny vidiny izao. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny Windows 10 sy macOS. Ho fanampin'izany, ao amin'ny tranonkalany no ahitantsika fitaovana hafa avy amin'ny orinasa Tenorshare, fantatra amin'ny sehatra, ary hahafahantsika mamaha ny olanay amin'ny Windows sy iOS ary Android.
Sintomy ny Tenorshare iPhone Data Recovery ho an'ny Windows
Sintomy ny Tenorshare iPhone Data Recovery for Mac
Amin'ny Espaniôla izy io
Tsy mifanaraka amin'ny vahaolana Retina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Nisy zavatra nofafanao tsy nety ve? iPhone Data Recovery no vahaolana
Noho io haitao io dia afaka mahatratra hafainganam-pandeha hatramin'ny 1 Tbps ny optika fibre